UPhil Schiller uxolisa ngokungabikho kohlaziyo kwiMac Pro. Ndisuka mac
Kuqhelekile ukuba iApple ilindele ukuhamba kwakho kude kangaka. Xa iMac Pro ingaphezulu kweentsuku ezili-1.200 ngaphandle kokubona uhlaziyo, kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele kule webhusayithi inye iinjongo zeApple ngokwezicwangciso ze Eyona Mac inamandla Kunye ne Ukuhlaziywa kweMac. Nangona kunjalo, kuya kufuneka silinde ubuncinci kude kube lonyaka ozayo ukubona uninzi lweendaba. Nangona kunjalo UPhil Schiller, Umphathi weNtengiso weApple, waxolisa ngokungabikho kohlaziyo kuluhlu lwePro kwaye igxininise ukuzibophelela kwayo kubasebenzisi abaziingcali, ukubabuyekeza "ngento enkulu" ngokutsho udliwano ndlebe inikwe iphephancwadi iTechCrunch
Ewe, siye saba ne-hiatus kuphuculo kunye nohlaziyo, Siyaxolisa ukuba kwenzeke ngeMac Pro kwaye siza kuphuma nento enkulu ukuyibuyisela.
Uxolo aluzange lujongiswe kuphela kukucotha ekuhlaziyweni kwezixhobo, kodwa nakwimeko yokungacwangcisi kakuhle.
Asifuni kungxama, ndixelela iqela ukuba lithathe ixesha lokwenza into entle kakhulu. Ukubheja kwinto enokuhlala ixesha elide, ngohlaziyo kunye nophuculo kwiminyaka eliqela. Siza kuthatha ixesha lokwenza njalo. Uluhlu lweMac Pro, njengoko besitshilo amatyeli aliqela, ibifakwe imeko ye-thermal (ukonyuka okubonakalayo kubushushu bezixhobo) ezithintela uhlaziyo lwezixhobo. Ke ngoko, siyaxolisa ngokudanisa abathengi bethu. Sicele iqela labaqulunqi, iqela elinokwandiswa ngakumbi kwaye elinokusetyenziswa kwixesha elizayo ngabasebenzisi abanezibuyekezo ezininzi.
UPhil Schiller, iyayivuma ingxaki kwaye ithembisa ukungafihlisi ngakumbi kubasebenzisi abaziingcali abathe batyale imali eninzi kwi-Mac yabo.
Siza kuthetha ngento eyenzekayo kwaye, ngokungafihlisiyo, singafihli nto kwezinye izinto esizenzayo, apho siya khona, kuba abasebenzisi bethu bayazifuna kwaye sibakhathalele kakhulu kwaye sizinikele ekunxibelelaneni. kakuhle nabo.kwaye ubancede bayiqonde into esiyenzayo. Sifuna ukungafihli nto njengoko sinako, KUNYE nokukunceda kwizigqibo zakho zokuthenga. Yiyo loo nto silapha.
Ngoku iApple ibonisa ngokucacileyo indlela yayo ngokunxulumene neeMacs, kufanelekile ukubanika indawo eyaneleyo yokwenza iimveliso ezintsha ezinesakhono sokumothusa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UPhil Schiller uxolisa ngokungabikho kohlaziyo kwiMac Pro.